Mụ agbọghọ Na Tbọchị ICT 2021: Creatmepụta Ọgbọ Na-esote nke Ndị Isi Nwaanyị
Ebe E Si Nweta: itu.int
Otu n'ime ihe ndị ọrịa na-efe efe nke COVID-19 manyere n'obodo bụ ịwepụ anụ ahụ. Ọ bụ ezie na nke a hapụrụ ọtụtụ ihe achọrọ, ihe ọmụma na teknụzụ nkwukọrịta (ICT) bara ezigbo uru n'oge a, na-enyere anyị aka ịnọgide na-enwe ụdị ọdịdị nkịtị, na-akpakọrịta ndị ọzọ, na ịnọgide na-arụ ọrụ dị mkpa na azụmaahịa na-aga.
Ọbụna na nke a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ụwa ka na-anọghị n'ịntanetị na ọtụtụ n'ime ndị na-enweghị ike ịnweta teknụzụ dijitalụ bụ ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ nọ na mba ndị na-emepe emepe dịka United Nations International Telecommunication Union (ITU) si kwuo.
Onu ogugu enwere ugbua site na ITU na-ekpughe na enwere 17% okike di iche na ndi oru intaneti n’uwa nile. Dika oghere a na-eto, otu a ka ahaghi nhatanha na-egbochi umu nwanyi na umu agbogho inweta ohere inweta mmuta, ichu oru di elu ma puta ahia ohuru. N'ihi ya, Girlsmụ nwanyị International na ụbọchị ICT Ebumnuche iji kpalie usoro zuru ụwa ọnụ iji mee ka ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị nọchite anya teknụzụ.
Emere kwa afọ na Tọzdee ọ bụla nke Eprel, a na-eme emume International Girls in ICT Day iji kwalite ohere ọrụ teknụzụ maka ụmụ agbọghọ na ụmụ nwanyị nọ na ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa n'ụwa. Taa na-emechi afọ iri nke mmemme a nke a na-eme n’ụwa niile na-asọpụrụ ụmụ agbọghọ na ICT.
Girlsmụ nwanyị International na ụbọchị ICT- Girlsmụ agbọghọ ejikọtara, Creatmepụta Ọdịnihu Dị Mma
In addition to reminding the world that ICT can improve the lives of people everywhere through quality health care systems, improved environmental management, advanced communications, and better educational systems that redefine children and adult learning, this special day encourages governments, NGOs, and the private sector to find ways to equip girls and young women with the skills they need to become ICT professionals.
Na-aga ITU mere atụmatụ nka nke ihe ghari ka ihe kariri nde mmadu abuo na ngalaba ihe ọmụma na teknụzụ nkwukọrịta (ICT), ọ dị mkpa karịa ikpughe ụmụ agbọghọ na ụmụ agbọghọ na teknụzụ.
The agency also asserts that females who know coding, apps development, and computer science will be well-positioned for a successful career in the Ngalaba ICT. What’s more, ICT skills are increasingly becoming an advantage for students in just about any other field of study.
N’imesi ike mkpa inwe ọtụtụ ụmụ nwanyị na ICT, Brahima Sanou, Director nke ITU na Telecommunication Development Bureau kwuru, Inye umuaka ikike ka ha choo oru na ICT abughi ihe diri umu agbogho na ezinulo ha anya, o nwere ike buru nnukwu oganiru mmepe obodo na obodo. ”
Site n'enyemaka ọzọ maka agụmakwụkwọ na ọzụzụ nka, International Girls in ICT Day bụ oku doro anya maka mmadụ niile iji nyekwuo ike ụmụ agbọghọ na ụmụ agbọghọ ịchụso ọrụ na STEM, na-eme ka ụdị dijitalụ dị iche iche. Ọ na-agba mbọ maka mbọ nke ụlọ ọrụ na otu ndị bidoro mmemme iji lebara anya n'ihe gbasara ụdị dijitalụ nke nwoke na ụwa dum.
Ihe ndị a na-egosi na ọ dị mkpa ịkwadebe ụmụ nwanyị nwere nkà dijitalụ nke ga-akwadebe ha maka ọdịnihu.
Tupu m gaa ebe a mara ụlọikwuu, amaghị m ihe ọ bụla gbasara sayensị kọmputa. Ọ bụ ya mere m ji họrọ ọgwụ, ” kwuru, sị Selamawit Haile, onye gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị bụ onye sonyere n'usoro izu nzuzo nke izu abụọ na Etiopia nke ndị African Girls Can Code Initiative haziri.
N'otu aka ahụ, Greatness Olatunbi dị afọ 10, nwa akwụkwọ 4 bụ isi bụ onye mechara rụchaa mmemme nzuzo nke TechAmaka haziri, a [email protected] Initiative nwere nke a iji kwuo: “Ọ ga-amasị m ịme egwuregwu karịa iji ọkọ. Ọ na-amasị m iji usoro nanị m. ”
Ihe dị iche na ahụmịhe ụmụ nwanyị a bụ na ikpughe ụmụ agbọghọ na ICT n'oge ha bụ nwata nwere ike, n'ụzọ dị ukwuu, ịkpụzi ma metụta mkpebi ha ịchụso ọrụ na teknụzụ.